Umsebenzi wasekhaya | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Umsebenzi wasekhaya
Imithetho yokuziphatha ngexesha lokuduma kweendudumo. Zonke iindawo !!
Imigaqo yokuziphatha ngexesha lesiphango. Yonke into ikhomba ngenqaku !! Iindudumo yinto entle kwaye entle yendalo. Kodwa iindudumo zathwala ingozi enkulu - ukubetha kombane. Ukuzikhusela kuzo, kufuneka ulandele imigaqo ethile ...
Yintoni i-twist yolwimi? Ulwimi oluguquliweyo luyilelwe ukuphuhlisa intetho, ukuphucula isichazi-magama kunye nokuzonwabisa. Kuya kufuneka ufunde ukujija kolwimi ukusuka ebuntwaneni uqobo, kuba ukufunda iilwimi kunye nokukhumbula ngentloko kunceda ukwenza into entle, nokuba yintetho, ikufundise ukubiza ...
Ukubhala kwimidlalo kukhulu
Isincoko ngesihloko semidlalo silunge kakhulu. Umfundi wam upasile esi sincoko kuvavanyo! Kuhle kangakanani ... ezemidlalo! Lilizwi elifutshane kodwa elibaluleke kakhulu kubomi bomntu. Ubomi bethu abucingeki ngaphandle ...
I-4 yinkalo yesiganeko, esithetha apho abantu bavakalisa iphupha loxolo nokuvisisana omnye nomnye.
Iintsomi zeBanga lesi-4, amaqhalo apho amaphupha abantu abanoxolo nemvisiswano omnye nomnye ebonakaliswa ngaphandle komhlobo entliziyweni yesitshingitshane.
Ziziphi iindibano ezidumileyo zamaGrisi, amagama abo nanamhla? Ezi zihamba zabizwa ngokuthi iMilon, Polydam, Feagen.
Yintoni eyaduma iimbaleki zamaGrike, amagama abo unanamhla? Amagama oku kuhamba yayinguMilon, Polydam, Theagen. UMilon - wayephumelele i-Olimpiki amaxesha ama-6, imidlalo yePolidam-wayehamba ngengonyama ngezandla zakhe uFeagen - waphumelela ...
Uncedo ngomsebenzi wasekhaya. Iifomu zeefomu zokuthelekisa izichazi ezilungileyo ezimbi ezimbi ezimbi ezibi ziqhenkco
Ncedisa ngomsebenzi wakho wesikolo. Yenza iifom zezidanga zokuthelekisa izichazi Ezilungileyo Bitter ezimbi ezimbi bright sweet to form BHALA phantsi iidigri ezilula nezimbaxa zokuthelekisa izichazi JUICY, COMPORTABLE, TASTY. UCACILE, UNAMANDLA, MNANDI, ...
yonke i-1, i-2, i-3 yokuncipha?
yonke eyoku-1, yesi-2, eyesi-3 yokuhla kwesiphelo? Ukugqitywa kweshumi (1) ukuhla komhla woku-2 Ukuhla komhla woku-3 Ukuhla komhla woku-1: Izibizo zowasetyhini, umzekelo: idacha, intaka, imaski, icephe, umnqwazi. Ukugqitywa kwesibini: izibizo zobudoda nezingaphandle, umzekelo: idyasi, ...
Ngaba igama "nangona kunjalo" ligama lokwazisa?
Ngaba igama "nangona kunjalo" ligama lokwazisa? ewe ewe, eli ligama lokwazisa. Igama, nangona kunjalo, intshayelelo ukuba ibonakala ngaphakathi okanye esiphelweni sesivakalisi: uGanin, nangona kunjalo, akazange abe nesisa kakhulu nge ...
Uncedo lokwenza ngokubunjwa kwelizwi, ukugqithisa, ukuchukumisa, ukuphakama, ububanzi, buyele.
Nceda wenze amagama, iirust, caresses, banzi, banzi, ndizakubuya. 1. Rustle - ingcambu kunye nesiseko, siphela. 2. caress - ingcambu, is - isimamva, et - ukuphela, ukubamba ...
Nika imizekelo yemisebenzi yobungcali
Nika imizekelo yobungcali bobungcali Uqeqesho luyimfuneko eluntwini, lilinganiselwe (ngenxa yokwahlulwa kwabasebenzi) indawo yokusebenzisa amandla omzimba nawomoya womntu, emnika ithuba lokuba abekho kwaye aphuhle ukubuyisela umsebenzi owenziwe nguye. ...
Uncedo nceda! Ndifuna imbali emfutshane yokuvula inkqubo yexesha leMendeleev
Nceda nceda !!! ukuxhomekeka kweepropathi ezahlukeneyo zezinto kwintlawulo yenucleus yeatom. Inkqubo yile ...
ezaposwa ngomhla 02.09.2018 21.12.2018
yintoni isibizo Isibizo yindawo ezimeleyo (ebalulekileyo) yentetho ebonisa into kwaye uphendule imibuzo ngubani? , Intoni? (umhlaba, iRussia, luhlaza okwesibhakabhaka, ukuhamba, uvuyo). Izibizo ngamagama athi ...
Iminyaka yoburhulumente neminyaka yemicimbi yeVladimir the Great
Iminyaka yolawulo kunye neminyaka yemicimbi kaVladimir Omkhulu KhZ 980-1015 ukusuka ngo-980 ukuya ku-1015 uVladimir wayengunyana weGrand Duke yaseKiev Svyatoslav Igorevich kunye nogcina indlu kanina, u-Grand Duchess Olga, Malusha ...
Page 1 Page 2 ... Page 326 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-80 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,592.